Leadfeeder: Chọpụta ma merie ụlọ ọrụ B2B na-eleta saịtị gị | Martech Zone
Onye ndu bụ ngwa weebụ nke na-eme ka ọgụgụ isi ahịa gị dịkwuo elu site na ijikọta data ahịa na ahịa gị, na-enyere nzukọ gị aka ịchọta azụmahịa ọhụrụ ma nyochaa ndị ahịa dị ugbu a na-abịa na weebụsaịtị gị. Achọpụta ihe ahụ yana yana nchekwa data bara ụba nke ndị ọrụ ebe ị nwere ike ịchọta ozi ịntanetị na profaịlụ mmekọrịta nke ndị na-eme mkpebi n'ime nzukọ ahụ. Nke a bụ nnukwu ọrụ maka azụmaahịa B2B n'ihi na ọ nwere ike ịmata ndị ọbịa na-amaghị aha nwere ebumnuche ịzụta.
Mata ABM atụmanya Ileta gị na saịtị
Dị ka akụkụ nke Ahịa-Dabere na Ahịa (ABM) atụmatụ, nke a bụ ngwá ọrụ dị egwu. Ka ị na-elekwasị anya, kpọsaa, ma ọ bụ kwalite ngwaahịa na ọrụ gị na ụlọ ọrụ ụfọdụ, ị nwere ike ịdọ ndị ọrụ ahịa gị aka mgbe ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eleta weebụsaịtị gị wee hụ ebe ha na-emekọrịta na saịtị gị. Leadfeeder na-enyere gị aka ịmekọrịta ndepụta nke akaụntụ gị na Leadfeeder, kenye onye nnọchi anya, ma gwa gị ozugbo ha gara na weebụsaịtị gị. Otu ndị ahịa gị nwere ike ịgbaso usoro ahụ.
Iji LeadFeeder Gị Ahịa Usoro
Iji akụrụngwa dị ka nke a nwere ike ime ka ndị otu ahịa gị na-elekwasị anya na atụmanya dị elu maka ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ gị. Na Leadfeeder na CRM gị ma ọ bụ ABM n'elu ikpo okwu, a ahụkarị usoro nwere ike ịdị ka nke a:
Onye ọbịa a na-amaghị aha na-abịa na weebụsaịtị gị.
Dabere na ụfọdụ azụmahịa nzacha ị melite ma ọ bụ ABM lekwasịrị ị synced, gị ahịa nnọchiteanya na-amara gị ọkwa nke ọrụ.
Ọ bụrụ na ị naghị eme ABM, ndị ahịa gị nwere ike ile anya ụlọ ọrụ ma chọpụta ma ọ bụ atụmanya ma ọ bụ na ọ dabere na profaịlụ ụlọ ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ọ bụ atụmanya, onye na-ere ahịa gị nwere ike ịchọ kọntaktị na ụlọ ọrụ ahụ Onye ndu iji chọpụta onye bụ onye na-eme mkpebi n'ime ụlọ ọrụ iji kpọtụrụ.
Cannwere ike izipu ozi ịntanetị na-akpaghị aka site na ikpo okwu ahịa email gị ma ọ bụ onye na-ere ahịa gị nwere ike izipu ozi ma ọ bụ kpọọ oku na-enye aka ma ọ bụ melite oku.
Atụmatụ Leadfeeder gụnyere
Kpọtụrụ Insights - Leadfeeder na-enye ohere maka ebe nchekwa data siri ike maka kọntaktị maka gị. Ugbu a ị nwere ike ịmalite mkparịta ụka na obere mbọ.
Akpaka ndu akara - A na-etinye ndu kachasị ewu ewu gị na ndepụta ndepụta ndu gị ka ị wee mara ebe ị ga-elekwasị anya na-esote.
Ndu Generator ozugbo - Anyị tracker mgbe niile pushes data ọ bụla 5-mins! Inye gi ohere nke ohere ịchụso ozugbo ha batara.
Mata Email nkeonwe - Mgbe ụlọ ọrụ ụfọdụ akọwapụtara na webụsaịtị gị, email ga - agwa gị nke ga - eme ka ị zue oge zuru oke.
Akpaaka gị CRM - Ozugbo ị jikọtara otu n'ime ọtụtụ njikọ CRM anyị, ma ọ bụ Slack, na Leadfeeder gị, nọdụ ala ka anyị na-eziga nleta ọhụụ na ọdụ ụgbọ mmiri gị na-akpaghị aka.
Free Ọrụ - Tinye ọtụtụ ndị ọrụ masịrị gị ma jiri Leadfeeder na-eduzi ọrụ njikwa ngwa ọrụ ka ụlọ ọrụ gị ghara ịhapụ ụzọ ntanetị ọzọ.
Icho ike - Chọọ ụlọ ọrụ ọ bụla na Leadfeeder ma lelee akụkọ nchọgharị ha zuru oke ka ị nweta nkọwa zuru oke nke ihe masịrị ha.
Nzacha vasatail - Mepụta na chekwaa ụdị nri dị ike dị ka ụlọ ọrụ sitere na mba ụfọdụ, mgbasa ozi AdWords ma ọ bụ ụfọdụ ibe weebụ.
Leadfeeder na-ejikọta na Pipedrive, Mailchimp, Salesforce, Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, Google Data Studio, na Google Analytics.
Bido ụbọchị 14 n'efu nke Leadfeeder
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta maka Onye ndu ke ibuotikọ emi.
Tags: ahia di na akaụntụGoogle Analyticsgoogle data studiogsuiteokpokoroOjejojemailchimpmicrosoft na-agbanwe agbanwe 365Na-agba ọsọndị ahịaslackWebCRMikeZoho